बाइबलका कथाहरू: एउटा स्वर्गदूत मरियमलाई भेट्न आउँछन् - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
यो राम्री युवती मरियम हो। ऊ इस्राएली हो र नासरत सहरमा बस्छे। मरियम असल व्यक्ति हो भनेर परमेश्वरलाई थाह छ। यसैकारण उहाँले आफ्नो स्वर्गदूत गब्रिएललाई ऊसित कुरा गर्न पठाउनुहुन्छ। गब्रिएलले उसलाई के भन्छन्, तिमीलाई थाह छ?
गब्रिएल उसलाई यसो भन्छन्: ‘हे कृपाको पात्र, तिमीलाई सलाम। यहोवा तिमीसँग हुनुहुन्छ।’ तर मरियमले यस व्यक्तिलाई पहिले कहिल्यै देखेकी थिइन। गब्रिएलले के भन्न खोजेका हुन्, त्यो नबुझेर मरियम आत्तिन्छे। तर गब्रिएल उसलाई तुरुन्तै शान्त पार्छन्।
गब्रिएल यसो भन्छन्: ‘मरियम नडराऊ। यहोवा तिमीसित असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले तिम्रो लागि अचम्मको काम गर्न लाग्नुभएको छ। अब तिमीले छिट्टै एउटा बालक जन्माउनेछ्यौ। तिमीले उसको नाउँ येशू राख्नू।’
गब्रिएल अझ यसो पनि भन्छन्: ‘यो बालक महान् हुनेछ। उहाँ परमप्रधान परमेश्वरको छोरा कहलाइनुहुनेछ। यहोवाले उहाँलाई दाऊदजस्तै राजा बनाउनुहुनेछ। येशू सधैंको निम्ति राजा हुनुहुनेछ। उहाँको राज्यको कहिल्यै अन्त हुनेछैन!’
गब्रिएलको कुरा सुनेर छक्क पर्दै मरियम सोध्छे: ‘यो कसरी हुन सक्छ र? मेरो बिहे नै भएको छैन। मैले कसरी बच्चा जन्माउन सक्छु र?’
गब्रिएल यस्तो जवाफ दिन्छन्: ‘तिमीले परमेश्वरको शक्ति पाउनेछौ। यसकारण तिमीले जन्माउने बालक परमेश्वरको छोरा कहलाइनेछ। तिम्रै नातेदार इलीशिबालाई सम्झ। उसको बच्चा जन्माउने उमेर गइसक्यो भनेर मान्छेहरू भन्थे। तर अहिले बुढेसकालमा उसको पेटमा छोरो छ। किनकि, परमेश्वरका लागि केही कुरा असम्भव छैन।’
ग्रब्रिएलको कुरा सुनेपछि मरियम तुरुन्तै यसो भन्छे: ‘हेर्नुहोस्, म यहोवाकी दासी हुँ! मलाई तपाईंको वचनअनुसार होस्।’ यसपछि स्वर्गदूत गइहाल्छन्।
त्यसपछि मरियम हतारिंदै इलीशिबालाई भेट्न जान्छे। इलीशिबाले मरियमको स्वर सुन्दा इलीशिबाको पेटमा भएको बच्चा खुसीले उफ्रन्छ। अनि इलीशिबा परमेश्वरको आत्माले भरिपूर्ण भएर यसो भन्छे: ‘तिमी आइमाईहरूमध्ये धन्यकी हौ।’ मरियम इलीशिबासित झन्डै तीन महिनासम्म बस्छे। त्यसपछि ऊ नासरतमा आफ्नो घर फर्कन्छे।
मरियमको यूसुफ नाउँ भएको युवकसित बिहे हुनै लागेको छ। तर मरियमले बच्चा जन्माउन लागेको कुरा सुनेपछि यूसुफले मरियमसित बिहे नगर्ने विचार गर्छ। तर परमेश्वरको स्वर्गदूत ऊकहाँ आएर यसो भन्छ: ‘मरियमलाई बिहे गरेर आफ्नी पत्नी बनाउन नडराऊ। किनभने परमेश्वरले नै उसलाई छोरा दिनुभएको हो।’ त्यसपछि यूसुफले मरियमलाई बिहे गर्छ। अनि उनीहरू दुवै जना येशू कहिले जन्मिन्छ भनेर पर्खेर बस्छन्।
लूका १:२६-५६; मत्ती १:१८-२५.
यो चित्रमा देखाइएकी आइमाई को हो?
गब्रिएलले मरियमलाई के भन्छन्?
कुनै पुरुषसँग बिहे नगरीकनै मरियमले बच्चा जन्माउनेछिन् भन्ने कुरालाई गब्रिएल कसरी बुझाउँछन्?
मरियमले आफ्नी दिदी पर्ने इलीशिबालाई भेट्न जाँदा के हुन्छ?
मरियमले बच्चा पाउन लागेकी छे भन्ने थाह पाएपछि युसूफले के गर्ने विचार गर्छ? तर पछि उसले आफ्नो विचार किन फेर्छ?
लूका १:२६-५६ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको जीवन मरियमको गर्भमा सार्नुहुँदा, आदमबाट आएको असिद्धताले असर गऱ्यो वा गरेन, लूका १:३५ ले के संकेत गर्छ? (हाग्गै २:११-१३; यूह. ६:६९; हिब्रू ७:२६; १०:५)
जन्मिनुअघि नै येशू कसरी सम्मानित हुनुभयो? (लूका १:४१-४३)
सेवा गर्ने विशेष मौका पाउनेहरूका लागि मरियमले कस्तो राम्रो उदाहरण बसाली? (लूका १:३८, ४६-४९; १७:१०; हितो. ११:२)
मत्ती १:१८-२५ पढ्नुहोस्।
येशूलाई इम्मानुएल भन्ने व्यक्तिगत नाउँ नदिइए तापनि उहाँले यस पृथ्वीमा हुनुहुँदा कसरी यो नाउँको अर्थ पूरा गर्नुभयो? (मत्ती १:२२, २३; यूह. १४:८-१०; हिब्रू १:१-३)
मरियमले गब्रिएल स्वर्गदूतलाई दिएको जवाफबाट हामी तिनको विश्वासबारे के थाह पाउन सक्छौं? तिनले अन्य कस्ता अनमोल गुणहरू प्रकट गरिन्‌?